China Liquid Filling and Capping Machine နှင့် စက်ရုံ |ညှိထားသည်။
ALFC စီးရီးအရည်ဖြည့်နှင့် အဖုံးအုပ်စက်ကို ပါးစပ်အရည်များ၊ ဆေးရည်များ၊ ဖြည့်စွက်စာများ စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးအဆောင်များအတွက် မတူညီသောအဆီများရှိသော အရည်ထုတ်ကုန်များကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
ဖြည့်စွက်ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းသည် ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ နေ့စဉ်ဓာတု၊ ဓာတုနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများရှိ ဆေးရည်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဖျော်ရည်နှင့် အခြားအရည်များ၏ ပုလင်းဖြည့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။၎င်းသည် GMP ဗားရှင်းအသစ်၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီသည်။လိုင်းတစ်ခုလုံးသည် အလိုအလျောက် ပုလင်းကွဲကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။၊ လေအဝတ်လျှော်ပုလင်း ၊ ပလပ်ဂါဖြည့် ၊ ဝက်အူထုပ် ၊ အလူမီနီယမ်သတ္တုပြား တံဆိပ်ခတ်ခြင်း ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း နှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များ။လိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် သေးငယ်သော ဧရိယာ၊ တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်မှု၊ ချွေတာပြီး လက်တွေ့ကျသည်။
1. အလိုအလျောက် ပုလင်းလွတ်စက်
3. အရည်ဖြည့် (rolling) capping machine
4. Electromagnetic induction aluminium foil တံဆိပ်ခတ်စက်
5. Self-adhesive တံဆိပ်ကပ်စက်
1. လူအင်အားကို ချွေတာပြီး လက်ဖြင့် ပုလင်းတင်ခြင်းကို အစားထိုးရန် အလိုအလျောက် ပုလင်းဖြုတ်ခြင်းကို အသုံးပြုပါ။
2. ပုလင်း၏သန့်ရှင်းမှုသေချာစေရန် ပုလင်းကိုဆေးကြောရန် ဓာတ်ငွေ့ကို သန့်စင်ပြီး static elimination ion wind bar ပါ၀င်သည် ။
3. ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ရန် plunger metering pump ကိုအသုံးပြုပြီး မြင့်မားသောဖြည့်တိကျမှုနှင့်အတူ ပျစ်သောအရည်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါသည်။ပန့်၏ဖွဲ့စည်းပုံသည် လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပိုးသတ်ရန်အတွက် အမြန်ချိတ်ဆက်မှု ဖြုတ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံပါသည်။
4. plunger metering pump ၏ ပစ္စတင်လက်စွပ်ကို စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အရည်ဖွဲ့စည်းမှုအရ ဆီလီကွန်ရော်ဘာ၊ tetrafluoroethylene သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ အထူးအချိန်အခါများတွင် ကြွေထည်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုပါသည်။
5. လိုင်းတစ်ခုလုံး PLC ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းအမြန်နှုန်း စည်းမျဉ်း၊ အလိုအလျောက်စနစ်၏ မြင့်မားသောဒီဂရီ။
6. အဖြည့်ပမာဏကို ချိန်ညှိရန် အဆင်ပြေသည်။မီတာတိုင်းတာရေးပန့်များအားလုံး၏ ဖြည့်စွက်ပမာဏကို တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ချိန်ညှိနိုင်ပြီး မီတာတိုင်းတာရေးပန့်တစ်ခုစီကိုလည်း အနည်းငယ်ချိန်ညှိနိုင်သည်။လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရိုးရှင်းပြီး ချိန်ညှိမှု မြန်ဆန်သည်။
7. ဖြည့်စွက်ဆေးထိုးအပ်ကို ပုလင်းအောက်ခြေသို့ စိမ့်ဝင်ပြီး အမြှုပ်ထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဖြည်းညှင်းစွာ ပေါက်သွားသည့် အစက်အစက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
8. မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးသည် မတူညီသောသတ်မှတ်ချက်များကို ပုလင်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ချိန်ညှိမှုသည် ရိုးရှင်းပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်နိုင်သည်။
9. လိုင်းတစ်ခုလုံးကို GMP လိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
မော်ဒယ် ALFC ၈/၂ ALFC ၄/၁
ဖြည့်စွက်နိုင်စွမ်း 20 ~ 1000 ml
ရွေးချယ်နိုင်သော Filling Capacity 20-100ml \_50-250ml\_100-500ml\_200ml-1000ml
ဦးထုပ်အမျိုးအစားများ Pilfer proof ဦးထုပ်များ၊ ဝက်အူထုပ်များ၊ ROPP ဦးထုပ်များ
အထွက် 3600 ~ 5000bph 2400 ~ 3000bph
Capping တိကျမှု ≥99%
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 220V 50/60Hz
ပါဝါ ≤2.2kw ≤1.2kw
အလေးချိန် 1000kg 800 ကီလိုဂရမ်
အတိုင်းအတာ 2200×1200×1600 2000×1200×1600
ယခင်- ALF-3 ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းစက် (ပုလင်းများအတွက်)
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် ကာတွန်းစက်
အလိုအလျောက် အရည် Capsule ဖြည့်စက်
Cannabis အရည် Capsule ဖြည့်စက်
Liquid Capsule ဖြည့်စက်
Liquid Gel Capsule ဖြည့်စက်
တံဆိပ်တပ်စက် (ပုလင်းအဝိုင်းအတွက်)၊ TAPM-A စီးရီး
ALF-3 Aseptic Filling and Closing Machine (အတွက်...
ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်ခြင်းနှင့် ပိတ်ခြင်းစက် (မျက်လုံးဆေးအတွက်...
အမှတ် 301, Bldg.1၊ 1555 Songpu Rd.(E), Nanbin St., Rui'an, Zhejiang, China.၃၂၅၂၀၇